နှင်းဆီ မင်းသားတွေရဲ့ ဖျော်ဖြေမှု တွေကို Private Closed Group ထဲမှာ သီးသန့် ဆုံတွေ့ အားပေးလို့ ရမယ့် အစီအစဉ် တစ်ခုကို ပြောပြ လာတဲ့ နေတိုး – Cele Posts
ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်) ဦးစီးပြီး နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗို၊ ရဲလေး၊ ထွန်းထွန်း၊ မိုးယုစံ၊ မေကဗျာ၊ မိုးပြည့်ပြည့်မောင်တို့ ပါဝင်တဲ့ နှင်းဆီအဖွဲ့ကြီး ကတော့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလို အခက်အခဲဖြစ် နေတဲ့ မြန်မာပြည်အနှံ့က ဒေသတွေကို ကူညီဖို့ ရံပုံငွေ ဖျော်ဖြေပွဲတွေ ကျင်းပလေ့ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မှာတော့ နေတိုးက နှင်းဆီ မင်းသားတွေရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေကို Private Closed Group ထဲမှာ သီးသန့်ဆုံတွေ့ အားပေးလို့ ရမယ့် အစီအစဉ် တစ်ခုကို ပြောပြလာ ခဲ့ပါတယ်။
“အေးချမ်းတဲ့❄ December ​လရဲ့ ညတစ်ညမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှင်းဆီပရိတ်သတ်တွေ အတွက်ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်လေးတခု စီစဉ်ထားပါတယ်။ ချစ်ရတဲ့ပရိတ်သတ်တွေလည်း အားလုံး ပျော်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှင်းဆီတွေလည်း ပျော်နေရမယ် အစီအစဉ်လေးပါ။ အဲ့အစီအစဉ်လေးက ဘာလည်း ဆိုတော့ နှင်းဆီ ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် သီးသီးသန့်သန့် နွေးနွေးထွေးထွေး ဆုံတွေ့အားပေးလို့ရမယ့် Private Closed Group လေးတခု ကို ဖန်တီးထားပါတယ်. ”
“နှင်းဆီကိုချစ်သော ပရိတ်သတ်များ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးထားတဲ့ Private Closed Group လေးထဲကို Group Member အဖြစ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက် မှုများကို အားပေးကြည့်ရှု နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှင်းဆီတွေရဲ့ Private Closed group ထဲကို ပရိသတ်တွေ က Group Members အဖြစ် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု အားပေးဖို့အတွက် Facebook account တခုကို ကျပ် ၅၀၀၀ သာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ …… ကျွန်တော့်တို့ နှင်းဆီတွေ ရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို သိချင်ရင်တော့ ဒီ နှင်းဆီတွေရဲ့ Private Closed Group ထဲကို လာ ရောက် Join ထားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Private Close group နာမည် နဲ့ ပြုလုပ်မယ့်ရက်နဲ့ အချိန်ကိုလည်း ထပ်မံ ကြေငြာသွားပါမယ်ဗျာ။ သေချာတာ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ နှင်းဆီ ပရိတ်သတ်တွေ အရမ်းပျော် နေစေမယ်ဗျာ။ ကဲ ဘယ်လို လည်း မိတ်ဆွေတို့…..??Stay Tuned……” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ ထွန်းထွန်းနဲ့ ရဲလေးတို့ကို သီးသီးသန့်သန့် တွေ့ဆုံနိုင်မယ့် Private Closed Group အစီအစဉ်လေး ကတော့ မြန်မာငွေကျပ် (၅၀၀၀) ကျပ်တည်းသာ ကျသင့် မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး လည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက် ပါတယ်။
နှငျးဆီ မငျးသားတှရေဲ့ ဖြျောဖွမှေု တှကေို Private Closed Group ထဲမှာ သီးသနျ့ ဆုံတှေ့ အားပေးလို့ ရမယျ့ အစီအစဉျ တဈခုကို ပွောပွ လာတဲ့ နတေိုး
ဒါရိုကျတာ မောငျမြိုးမငျး (ရငျတှငျးဖွဈ) ဦးစီးပွီး နတေိုး၊ မငျးမျောကှနျး၊ ကြျောကြျောဗို၊ ရဲလေး၊ ထှနျးထှနျး၊ မိုးယုစံ၊ မကေဗြာ၊ မိုးပွညျ့ပွညျ့မောငျတို့ ပါဝငျတဲ့ နှငျးဆီအဖှဲ့ကွီး ကတော့ နှဈစဉျနှဈတိုငျးလိုလို အခကျအခဲဖွဈ နတေဲ့ မွနျမာပွညျအနှံ့က ဒသေတှကေို ကူညီဖို့ ရံပုံငှေ ဖြျောဖွပှေဲတှေ ကငျြးပလရှေိ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနေ့ မှာတော့ နတေိုးက နှငျးဆီ မငျးသားတှရေဲ့ ဖြျောဖွမှေုတှကေို Private Closed Group ထဲမှာ သီးသနျ့ဆုံတှေ့ အားပေးလို့ ရမယျ့ အစီအစဉျ တဈခုကို ပွောပွလာ ခဲ့ပါတယျ။
“အေးခမျြးတဲ့❄ December ​လရဲ့ ညတဈညမှာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ နှငျးဆီပရိတျသတျတှေ အတှကျပြျောစရာ ကောငျးတဲ့ အစီအစဉျလေးတခု စီစဉျထားပါတယျ။ ခဈြရတဲ့ပရိတျသတျတှလေညျး အားလုံး ပြျောရမယျ။ ကြှနျတျောတို့ နှငျးဆီတှလေညျး ပြျောနရေမယျ အစီအစဉျလေးပါ။ အဲ့အစီအစဉျလေးက ဘာလညျး ဆိုတော့ နှငျးဆီ ပရိတျသတျတှေ အတှကျ သီးသီးသနျ့သနျ့ နှေးနှေးထှေးထှေး ဆုံတှအေ့ားပေးလို့ရမယျ့ Private Closed Group လေးတခု ကို ဖနျတီးထားပါတယျ. ”
“နှငျးဆီကိုခဈြသော ပရိတျသတျမြား အနနေဲ့ ကြှနျတျောတို့ ဖနျတီးထားတဲ့ Private Closed Group လေးထဲကို Group Member အဖွဈဝငျရောကျပွီးတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဖြျောဖွတေငျဆကျ မှုမြားကို အားပေးကွညျ့ရှု နိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီနှငျးဆီတှရေဲ့ Private Closed group ထဲကို ပရိသတျတှေ က Group Members အဖွဈ ဝငျရောကျ ကွညျ့ရှု အားပေးဖို့အတှကျ Facebook account တခုကို ကပျြ ၅၀၀၀ သာပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ ကဲ …… ကြှနျတေျာ့တို့ နှငျးဆီတှေ ရဲ့ဖြျောဖွတေငျဆကျမှုတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲဆိုတာကို သိခငျြရငျတော့ ဒီ နှငျးဆီတှရေဲ့ Private Closed Group ထဲကို လာ ရောကျ Join ထားဖို့ ဖိတျချေါပါတယျ။ Private Close group နာမညျ နဲ့ ပွုလုပျမယျ့ရကျနဲ့ အခြိနျကိုလညျး ထပျမံ ကွငွောသှားပါမယျဗြာ။ သခြောတာ ကတော့ ကြှနျတျောတို့ နှငျးဆီ ပရိတျသတျတှေ အရမျးပြျော နစေမေယျဗြာ။ ကဲ ဘယျလို လညျး မိတျဆှတေို့…..??Stay Tuned……” ဆိုပွီး ပွောလာခဲ့ တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
နတေိုး၊ မငျးမျောကှနျး၊ ကြျောကြျောဗိုလျ၊ ထှနျးထှနျးနဲ့ ရဲလေးတို့ကို သီးသီးသနျ့သနျ့ တှဆေုံ့နိုငျမယျ့ Private Closed Group အစီအစဉျလေး ကတော့ မွနျမာငှကေပျြ (၅၀၀၀) ကပျြတညျးသာ ကသြငျ့ မယျလို့ သိရပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံး လညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွ ပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျ ပါတယျ။
အဖေကို သီချင်းရေး ခိုင်းပြီး ချက်ချင်း အသံသွင်း ခိုင်းတဲ့ သမီးငယ်လေးရဲ့ ပထမဦးဆုံး သီချင်းကို ချပြလာတဲ့ ကျားပေါက်